Mario Rush - Online
နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » Mario Rush
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Mario Rush
ဖေါ်ပြချက်: အတားအဆီးများနှင့်ပြည့်စုံသောအဆင့်သို့ကူးဖို့ကသူ့အကြိုက်ဆုံးအနီကားထဲတွင် Mario မောင်း။ မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နှင့်လေယာဉ်ပျက်ကျရှောင်ကြဉ်ပါ။ မြင့်မားသောဂိုးသွင်းရန်အချက်များစုဆောင်းပါ။ ပျော်စရာစီးနင်းရှိသည်!
ကစား: 31,086 tag ကို: Mario, Mario ဂိမ်းတွေ, Super Mario
ဒါဟာယခုအခါမှိုင့်နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်ရန်ရှိသည်သောသူတို့အမာရီယိုနှင့် Luigi မဟုတ်ကြောင်းပုံရသည်။ သူ့သေနတ်တွေနဲ့ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြသည်သမျှသောဖုတ်ကောင်အနိုင်ယူဖို့ကိုကူညီပါ။ သူတို့အရိုးကိုလှည့်ဖုတ်ကောင်ဆန့်ကျင်ပစ်
မာရီယိုမင်းသမီးလေးပျော်ရွှင်စေလိုသည်။ သူကလေးစိန်စုဆောင်းဖို့ကျောက်ကိုထရံအခန်းကိုမီးရှို့နေတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မီးထဲသို့ပြေး။ သူ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာပြန်လာနိုင်ရန်ကူညီပေးပါ။
goomba vs ဒေါသထွက်နေတဲ့ Mario
အမျက်ထွက်မာရီယို Vs Goomba ပျော်စရာ Mario ပစ်ခတ်မှုဂိမ်း 20 အဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ထားသည်, သင့်အလုပ်အသီးအသီးသည့်အဆင့်ပြီးဆုံးရန် goomba ရိုက်ကူးဖို့ဒေါသထွက်နေသော Mario ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မာရီယိုမာစတာ yo ရိုက်ကူးနေပါတယ်, ဒါကြောင့်မယုံကြသနည်းသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကူညီပေးဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ဒါက။
Super Mario အရူးစက်ဘီး
သငျသညျသငျသညျနဂါး၏မီးတောက်အားဖြင့်မီးရှို့ရမည်ချင်ကြပါဘူး အကယ်. တွေအများကြီး run ဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာအခြားစိန်ခေါ်မှုအပေါ်စူပါမာရီယိုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်မြှင့်, လမ်းတစ်လျှောက်မှာသခြောသငျသညျအဖြစ်များစွာသောကြယ်တို့သည်သင်တတ်နိုင်သလောက်ရစေပါ
Super Mario တိုက်ခိုက်ဂိမ်း
စူပါမာရီယိုတိုက်ခိုက်ဂိမ်း။ ဘယ်လိုစူပါမာရီယိုနှင့်အတူအခြားစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လွှားဖို့အားလုံးကိုမိမိအသွက်လက်နှင့်ညှိနှိုင်းသုံးပြီးကော? လေထုထဲမှာသူတို့ကိုဖွင့်မှုတ်နဲ့ရိုက်ကူးဖို့မှိုဆီသို့ဦးတည်သည်သင်၏အမြောက်များရည်ရွယ်
ဖုတ်ကောင် vs Mario
အဖုတ်ကောင်ချွတ်မာရီယို Pend ကိုကူညီပါ။
ဇာတိမြေမှ Super Mario ပြန်လာ
အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်, မာရီယိုသူ့ကိုမိကျောင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့နှင့်မြင့်မားရမှတ်များအောင်မြင်ရန်ကူညီ home.Please ပြန်လာ။ မီးမှရွှေ့နှင့် spacebar မှမြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
Mario Kart စစ်တိုက်
မာရီယိုတို့တှငျအသင်တို့၏လေယာဉ်မှူးကိုရွေးချယ်ပါ။ Luigi, မင်းသမီး Peach နှင့် Bowser သီချင်းအပုဒ်ပေါ်မှာကတကယ် Kart ၏တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်သက်သေပြဖို့။ ဒါပေမယ့်အစားထက်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်သင်သည်ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်အဆင့်မှရွှေ့မှုတ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် run နှင့်အနိုင်ရ
နှင်းဖုံး Mario 2
ဒါဟာနောက်တဖန်အချိန် snowing ဖြစ်ပါတယ်။ မာရီယိုနဲ့မင်းသမီးပလက်ဖောင်းအတွက်အတူတကွကစားနေကြသည်။ ရုတ်တရက်နဂါး လာ. လှောင်အိမ်ထဲမှာမင်းသမီးဖွင့်သော့ခတ်ထား။ Mario snowball သို့သူအပေါင်းနဂါးလှည့်ကျနှငျ့တောချွတ် kickthem ကိုကူညီပါ။
မာရီယို Luigi Yoshi နှင့် Peach ကျောဤအချိန်များမှာရထားဘီးအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်မာရီယိုစက်ဘီးစီးစိနျချေါမှု၏အလွန်အေးမြသောပြိုင်ကားဂိမ်းအသီးအသီးအခြား Racing ။
မာရီယိုအပေါငျးတို့သမိကျောင်းရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်မင်းသမီး Peach ကယ်တင်ရန်ကိုကူညီပါ။5ကမ္ဘာရှိပါတယ်, အသီးအသီးကမ္ဘာ5အဆင့်အတန်းရှိတယ်။
Bowser မာရီယိုနှင့် Luigi တိုက်ခိုက်ဖို့သူ့ရဲ့လူရွှင်တော်ကားပျံသည်။ Bowser သူတို့ကိုမှာရောင်စုံကိရိယာရိုက်ကူးနှင့် Mario နှင့် Luigi ချမီးရှို့မည်။ တိုက်ခိုက်မှုမှ Mario နှင့် Luigi ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုရနိုင်သော platform ပေါ်တွင်လပ်ချိန်တွေလည်းရှိတယ်။ အဆိုပါပြဿနာကြိမ်မြောက်နေရာချဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်
Super Mario တာဘိုပြေးပြိုင်ပွဲ
မှိုစုဆောင်းဖို့လမျးပျေါမှာမာရီယိုရဲ့ထရပ်ကားအသုံးပြုခြင်း, သင်လျင်မြန်စွာသင်တန်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်, သငျသညျ Nitro နှင့်အတူပိုမိုလျင်မြန်စွာ N က key ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
Mario လှည်း 2
မာရီယိုလှည်း2မှာသစ်ကိုခုန်စပွေီးမှအတူနောက်ထပ်မာရီယိုပန်ကာဂိမ်း! , သူ့စျေးဝယ်လှည်းအသစ်အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်မာရီယိုပြေးပြိုင်ပွဲကိုကူညီပါမြန်နှုန်းအခွင့်အရေးများအတွက်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသေတ္တာများအရနှင့်သင်ထိန်းချုပ်မှုထဲကလည်ပါစေသောငှက်ပျောသီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
Mario ကိုအဲဂုတ္တုစွန့်စားမှု 2
ဦးလေးမာရီယိုမိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Racing အဲဂုတ္တုပြည်မှလာပွီ! ထိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ယှဉ်ပြိုင်ပူးပေါင်းရန်သင့်အဆင်သင့်ဇာတ်ကောင်ကိုရှေးခယျြကူးလာကြ!
မာရီယို Bowser ရဲတိုက်နှင့်သူ၏တပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်မယ့်မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကရန်သူ crash နိုငျသောဧရာမဗုံးသယ်တဲ့လေယာဉ်ပျံကြလိမ့်မည်။ Mario ရည်ရွယ်ထားကိုကူညီပါခြင်းနှင့် Bowser စစ်တပ်နှင့်ရဲတိုက်ထုတ်ကျယ်ပြန့်ဖို့လက်ျာရာအရပျမှာဗုံး drop ။